Nzaghachi Haptic: Mgbanwe nke Touchscreens | Martech Zone
Nzaghachi Haptic: Mgbanwe nke Touchscreens
Saturday, May 22, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịnụbeghị teknụzụ Haptic, ị ga-anụ. Ihe karịrị afọ iri gara aga, ndị nchọpụta na MIT bidoro ịmepụta ngwaọrụ ndị na-akpali ndị mmadụ maka mmetụta nke ngwa ngwa. N'ime afọ iri gara aga, teknụzụ amalitela ịmalite na ntanetị.
Afọ gara aga, Imikpu gosipụtara ngosipụta na CES nke nyere nzaghachi haptic. Site na ịhazigharị ugboro ole na mkpali na mkpịsị aka gị, ị na-enwe ike mụta nwa oge ị na-emetụ ihe aka. Iji maa atụ, ị nwere ike ime ka ihu gị dị larịị ma ọ bụ siri ike dịka ájá ájá. Ọ bụghị naanị na teknụzụ nwere ohere iji mepee sistemụ kọmputa maka nnweta nnweta nke ọma site n'aka ndị nwere nkwarụ, ọ nwere ike ịgbanwe ụzọ anyị si arụkọ ọrụ na kọmputa n'ozuzu ya.
Otu ihe atụ bụ kiiboodu mebere na ntanetị. M na-eji Droid eme ihe iPhone n'ihi na ọ na-esiri m ike iji ngwaọrụ na-enweghị nzaghachi mmetụta. Ọ bụrụ na m nwere ike iburu iPhone na keyboard nyere nzaghachi haptic na aka m, m ga-enwe ike -eche igodo na n'ụzọ ziri ezi pịa ha.
Teknụzụ na-agbasa karịa egwuregwu vidiyo ma na nka, ọgwụ na teknụzụ. Chegodi inwe ike emetụ Mgbidi Ebe Ọdịda Anyanwụ dị na Jerusalem, ma ọ bụ chee ihu n'ọdụ ụgbọ mmiri nke na-enye gị nzaghachi ndị na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị na-agbanye n'okporo ụzọ ebe ụgbọ ala ọzọ nọ! Ma ọ bụ ka - were ya na dọkịta na-eme ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ nke nyere nzaghachi ziri ezi maka usoro ịwa ahụ.
Ọ bụ ihe na-akpali akpali ịtụgharị uche banyere ohere niile yana otu esi ekwukọrịta ozi mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ị ga - enwe ike emetụ ndị ahịa gị mgbe ị na-etinye ha n'ịntanetị.
Tags: haptnzaghachi hapticihuenyo mmetụ aka
SaaS gbanwere ịnye data dị ka Ọrụ
Mee 22, 2010 na 4: 48 AM
Enwere m ihe niile maka nzaghachi haptic ma enwebeghị m nsogbu na iPhone enweghị ya. Oge ọ bụla m pịa leta na keyboard, otu nnukwu akwụkwọ ozi na-apụta ozugbo na-eme ka m mara na m pịa igodo na igodo m pịa.
Chọpụta, ọ bụghị haptic. Ọ bụ visual. Ma ọ na-emezu otu nzube na m dị umeala n'obi uche 🙂
Mee 22, 2010 na 9: 53 PM
Chaị! Anụbeghị m nke ahụ mana ọ dị ịtụnanya. ma eleghị anya, ọ ga-abụ na ọgbọ na-abịa iphone.